Ahlusunada Galgaduud oo mudo saacad ah Xabsiga dhigay wariyeyaasha Gobolka – SBC
Ahlusunada Galgaduud oo mudo saacad ah Xabsiga dhigay wariyeyaasha Gobolka
Ciidamada Amaanka Maamulka Ahlusuna waljameeca ayaa maanta xarig Mudo saacad ah u geystay Wariye yaal ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta gobolkaaasi Galgaduud.
Xariga ayaa dhacay saaka barqo nimadii inkastoo mudo saacad ah ka dib xoriyadoodii dib loogu soo celiyay wariye yaashaasi.
Ciidamada ayaan la aqoon sababta ay u xir xireen wariye yaasha, balse waxaa jira warar sheegaya in uu jiray tuhun ku aadan in wariye yasha ugaga warama warbaahinada kala duwan ee ku hadasha afka soomaaliga gudaha Galgaduud ay waxyaabo aan habooneen ka gudbiyeen maamulka gobolka.
Wariyaha SBC International ee Gobolkaasi oo isagu ka mid ahaa wariye yaashii ay ciidanku xoriyada ka qaadeen ayaa sheegay in mudo ku siman 1saac ay ku xirnaayeen xarun ay leyihiin ciidanka oo lagu magacabo 21naad, balse ka dib loo sheegay in ay fasax yihiin.
Ka dib markii uu dhacay falkani waxaa saxaafada arinkan raali gelin ka siiyay Madaxa Arimaha bulshada Culimada Ahlusuna waljamaaca Sh C/weli Xaaji Diiriye oo isagu ka mid ahaa dadkii dadaalka u galay sidii dib xoriyadooda loogu siin lahaa wariye yaashaaasi.
Sh Cabdi weli waxa uu sheegay in aanay jirin wax dembi ah oo ay wariye yaashu deegaanka ka galeen, laakiin ciidamada loo gaarsiiyay si qaldan warar kutiri kuteen ah, balse taasi ay raali gelin ka bixinayaan.